トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvakanakira nekuipira aiming siyana pakona ari nepachinko yokumusoro
Mumakore achangopfuura, tine ichiwedzera nepachinko parlors hwokugadza siyana wekona. Kazhinji, isu makasimbisa parutivi mashoma vamapoka chete womuenzaniso, muna Variety pakona, uyewo akagadza yakasiyana zvachose muenzaniso nokurondedzerwa rimwe. Kamwe dzakakurumbira maiva yokutevedzera, zvakakwana kuisa shanu kuti akagadzawo matanhatu, nezvikonzero akadai yakakurumbira hapana oparesheni asingadi kuramba, muenzaniso kuti haasisina kukupai sarudzo asi kubvisa, nokuti vatengi vanoda kutamba achiri, kana kubvumirwa kusiya zviumbu mashomanana, ine siyana pakona kana akamuka kutamba nostalgic kuti akashandisa tafura wekutaura. In
, kwakadaro siyana pakona Zvinobatsirei nekuipira kuti chinangwa, tichakurukura chii zvinhu.
Chokutanga, ndiko zvinobatsira, asi havazivi zvakanaka kusarudza pfungwa uye nepachinko zvakasiyana-siyana yokutevedzera nekuti pamakona vari kutamba zhinji, kuti zviri nyore mapere. Uyezve, zvinowanzoita kuti dzakanaka chipikiri kugadziridzwa, zvingadai zvinoshamisa kutamba.
Variety mukona, kusvikira kumusoro-spec muchina kubva Dejihane, pane zvakasiyana-siyana nokurondedzerwa yokutevedzera. Kare, asi Dejihane akanga akagadzwa vazhinji, anenge akanaka kuwedzera mukuru-spec muchina zvino. Kusiyana-siyana mukona, saka ruchigona dzakanaka chipikiri kuchinja kupfuura vamwe yokutevedzera, nokuti vaya yarova Hanemono muchina, uyo Hanemono kuti vave kuiswa iri Variety pakona, uyewo Kuchava zvisingatarisirwi kana chaiva chinangwa meso vanodzorera zvakanaka.
uye Variety pakona, panewo nepachinko yokumusoro kuti rookie chipikiri Artist chete kutanga chipikiri kuchinja ari mutariri, saka unogona kuwana tafura pfuma isingatarisirwi Pane akamhanya rinopfuura chipikiri kugadziridzwa murwi ezvipikiri vanamukoti urove, vachiri vanhu vanofamba pamusoro muna Hanemono pakati ndiyo meso chinangwa.
Uyezve, vaya kutamba siyana wekona, tine vanhu vakawanda akawandisa havazivi nepachinko. In
ichangopfuura, saka kana munhu akaoma mabasa akadai latency mukana kushanduka, iwe kana ndakamira pasina chiziviso kuti zviri pakavanda. Zvikuru fungidziro kuti kusakara iri tafura kwakadaro High kuri, iwe siyana wekona.
uye, sezvo zvazvakaipira, kusvika uye chokupika neimwe womuenzaniso, uye kuti zvinofanira kurangarirwa ndizvo zvose zvakasiyana, saka Dejihane kune vazhinji, ndizvo kuti hakuna zvikuru Specs ari muenzaniso kuti anogona kuva mutambo. In Variety mukona, zvakasiyana mhando vave kuiswa mune mumwe nomumwe. Saka, zvose kubudisa zvakasiyana.
izvo kuzadzisa ndechokuti, kana mukuru mwero rakavimbika kuwana, kurangarira kana chokupika iri, haangazodzingi kuziva kunyange apo akamira panguva akapfuurawo. Kana usingazivi pane zvose, kunyange kumira kuti anochinja zvakanaka pasinei chipikiri kugadziridzwa, zvakanaka Horukon yakatarwa, kunyange kana ndinonzwa sefungu ROM ndiko anotaridzika zvakanaka, zvichaita kutotadza mutambo dzemapurisa.
Zvino achitaura siyana, vakawanda nepachinko parlors kuti kuridza ndicho chinangwa chikuru, izvozvo ndezvechokwadi inova yakawanda kuisa Dejihane. Kana
Dejihane, dzakanaka uye zvishoma chipikiri kugadziridzwa, nokuti simba putika rehondo payout, hazvina kukutyisa somunhu nepachinko yokumusoro.
pfupiso Hanemono, ndivo vanhu vari Tachimawa 'kuna Dejihane centre iri kuedza kuyeva zvakare Variety wekona? Zvichava pakugumisa kuti. Kana, vazhinji nepachinko yokumusoro kuti Chinangwa chikuru kuti kutamba, kunotozongoita ichiwedzera kuisa Dejihane. Kana
pfupiso Hanemono, ndivo vanhu vari Tachimawa 'kuna Dejihane centre iri kuedza kuyeva zvakare Variety wekona? Zvichava pakugumisa kuti.